Igha ụgha nke amaokwu nke Akwụkwọ Nsọ "Ihe nile kwere omume nye ndị kwere na Chineke nke Israel": amaokwu a bụ ọnyà nke na-adọta Ndị Kraịst ka ha na-egbu nko nke Akwụkwọ Nsọ
Site na: KongoLisolona: Disemba 15, 2018 00: 30 Enweghị asịsa
N'ihi ya, ndị mmadụ na mba nile nọ na nhụsianya. Amaokwu a mere nonchalant, umengwụ, aghụghọ, ọha na eze n'efu, crank kwere ekwe ... Ha nabatara ọnọdụ ha nke nhụsianya na ịda ogbenye n'ihi na ha na-eche Chineke ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụ mee ya maka ha.
Na Democratic Republic of Congo, a na-atụ anya ka ha bụrụ abụ ma gbaa egwu ogologo ụbọchị niile: "Yahwé, Nzambe sala, Nzambe sala" (Yahwe, God act, God do).
N’agbanyeghi na Chineke esighi n’eluigwe wue wue uzo ha, ulo akwukwo ha, ulo ogwu ha, kpochapu Ugwu ha nile, wuru ha ulo oru. gị ọbụna wepụ onwe ha n'ụlọ ... Ha nọgidere na-enwe nkụda mmụọ na nhụsianya ọ bụla n'agbanyeghị ọtụtụ oku ha na-akpọku Chineke Israel ibia jeere ha ozi. Ọ bụ ụwa n'ezie!
Nke a bụ nwa okorobịa ahụ pastọ TB Joshua, gwara ya ka o nwee OKWUKWE "Ihe ọ bụla kwere omume nye onye kwere na Chineke nke Israel"
"Ihe ọ bụla ogologo nke abalị, anyanwụ mgbe niile na-akwụsị ọwụwa" Ugbu a, o nwere okwukwe "na ọ ga-akwadebe FUFU ya na okpomoku nke kandụl mepụtara, ka anyị nabata okwukwe anyị ... Lol!
Nnupụisi nke ụmụ Kivu: ime ihe ike na-ebibi ndị niile "Ndị na-eme ihe ike dị ka ndị na-atụ bọl; ebe ọ bụla ha na-aga, ọ bụ mbibi; ha na-etipịa ihe ọ bụla na-adịghị ike; mgbe ha batara n'ime ndụ ezinụlọ na-aghọ hell; N'ebe ọ bụla ha bilitere, ha na-ahapụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị nbibi, nhụjuanya, na obi nkoropụ. "
Ọkt31 01: 16
iru mmiri 80%
Hi / le: 14/8 ℃
oké igwe ojii
Hi / le: 7/3 ℃
iru mmiri: 58
Hi / le: 11/3 ℃
Fraị Nọvemba 06
Hi / le: 17/10 ℃
Ọktoba 31, 2020 00: 50
Ọktoba 31, 2020 00: 45
Ọktoba 31, 2020 00: 40
Ọktoba 31, 2020 00: 30